भनिन्छ हामी जति मुस्कुराउँछौ त्यति नै आफ्ना वरपर खुसी ल्याउन सक्छौं । निरास रहेर भन्दा हासेर जीवन जीउन सल्लाह दिन्छन् स्वास्थ्यविज्ञहरु । तपाई जतिपटक हास्नुहुन्छु अनि मुस्कुराउनु हुन्छ त्यतिपटक नै जीवनमा खुसी रहन सक्नुहुन्छ । अनि तपाईको स्वास्थ्यलाई पनि सन्तुलनमा राख्न सक्नुहुन्छ ।
आउनुहोस् जानौं जीवनमा मुस्कुराएर बाच्ने १३ तरिका
१-मुस्कुराउनु- हामी खुसी हुँदा हाँस्ने गर्छौँ । हामी जब खुसी हुन्छौँ तब हाँस्छौँ । मुस्कुराउनु किन राम्रो हो भने यसले दिमागबाट डोपामिन नामक हार्मोन रिलिज गर्छ, जसले गर्दा हामी खुसी हुन्छौँ । हाँसोको मतलब बनावटी हाँसो होइन । हरेक बिहान ऐना अगाडि हाँस्ने अभ्यास गर्नुस्, खुसी हुन सिकिन्छ ।
२- व्यायाम गर्नहोस्-नियमित व्यायामले तनाव, चिन्ता अनि डिप्रेसनका लक्षणहरुलाई आत्मविश्वास र खुसीमा बदल्न मद्दत गर्छ । दिनमा थोरै मात्र व्यायाम गर्दा पनि धेरै फरक पार्छ । ५ मिनेट पनि आङ तन्काउनुभयो भने हल्का महसुस हुन्छ । त्यसैगरी हिँड्ने बानी बसाल्न सक्नुहुन्छ । रातिको खाना खाएपछि एकछिन टहल्नु राम्रो हुन्छ । त्यसैगरी योग कक्षा पनि लिन सक्नुहुन्छ । नृत्य गर्नुहोस्, आफ्नो मनपरेको खेल खेल्नुहोस् ।
३- हप्तामा एकदिन फोन बन्द राख्नुस् –हप्तामा एकदिन भए पनि फोन बन्द राख्नुस् । हुन त हामी अहिले फोनबिना बाँच्नै नसक्ने जस्तै भएका छौँ । दिनरात फोन चलाउँदा मानिसमा सिर्जनात्मकता पनि घट्दै गएको छ । आफ्नो विद्युतीय सामान जस्तैः फोन, ल्यापटप, हप्ताको कम्तीमा एक दिन अफ गर्नुस् । यी कुरा त जहिल्यै आफूसँगै रहने वस्तु न हुन्। आफूसँग नहुँदाको क्षण सम्झनुस्, फरक पाउनुस् । आफ्नो दिमागलाई केही सोच्ने र गर्नको लागि खालि छोडिदिनुस् । पढ्नुस्, ध्यान गर्नुस् । हिँड्नुस्, आफ्नो वतावाणलाई पनि नियाल्नुस् । समाजमा घुलमिल हुनुस् या एक्लै बस्नुस्, आफ्नो सार्थकता खोज्नुस् ।
४- प्रकृतिसँग रमाउनुहोस्- प्रकृतिसँग कम्तीमा दिनको ३० मिनेट जति हरियालीमा समय बिताउनुभयो भने तपाईंको प्रेसर घट्नुका साथै डिप्रेसन पनि घट्ने एक अध्ययनले बताउँछ । घरछेउको पार्क होस् या घरपछाडिको सानो हरियाली ठाउँ या बगैँचा, तपाईंले प्रकृतिलाई महसुस गर्न सक्नुहुन्छ । स्वच्छ हावा पाउन सक्नुहुन्छ । यसले दिमागलाई फ्रेस हुन मद्दत गर्दछ ।
५ ध्यान गर्नुहोस्- ध्यान गर्ने पनि विभिन्न उपाय छन् । अहिले अध्यात्ममा पनि धेरै रुचि राख्ने गरेको पाइन्छ । तपाईंले समान्य ध्यान गर्नु सक्नुहुन्छ । ५ मिनेट शान्त भएर बस्नुस्, त्यो पनि ध्यान नै हो ।
पर्याप्त मात्रामा सुत्नुहोस्- पर्याप्त मात्रामा सुत्नाले स्वास्थ्य राम्रो बनाउनुका साथै दिमागी सञ्चालन र भावनात्मक रुपले पनि राम्रो राख्छ । वयस्क मान्छेले राति कम्तीमा ७ देखि ८ घन्टा मज्जाले सुत्नुपर्छ । यदि दिउँसो निद्रा लाग्छ या आलस्य महसुस हुन्छ भने जान्नुस् तपाईंलाई आरामको जरुरत छ । सुत्ने र उठ्ने तालिका हरेक दिन एउटै बनाउनुस् । आफ्नो सुत्ने कोठा शान्त र सौम्य राख्नुस् । दिउँसो झप्को लिनु पर्दा २० मिनेट भन्दा बढी नलिनुस् । यदि रातमा निद्रा लाग्दैन भने चिकित्सकसँग सम्पर्क गर्नुस् ।
६- कृतज्ञ हुन सिक्नुस् –आफू कृतज्ञ हुनुभयो भने तपाईंको मुडलाई पनि ऊर्जा प्राप्त हुन्छ । कृतज्ञ हुँदा आशा गर्ने बानी र खुसी रहने बानीमा पनि परिवर्तन आउने एक अध्ययन बताउँछ । आफ्नो वरिपरि रहेका सकारात्मक कुरालाई नियाल्नुहोस् । राम्रा अनि सन्तुष्टि दिने कुरामा ध्यान दिनुहोस्, चाहे तपाईंलाई कसैले माया गर्छ वा तपाईंको जागिरमा बढोत्तरी भएको छ, त्यसबाट खुसीको अंश निकाल्नुस् । साथीहरुले तपाईंलाई सामान्य चिया गफको लागि निम्तो दियो वा छिमेकीले हात हल्लाएर हालखबर सोधे पनि मन खुसी पार्न सक्नुहुन्छ ।
७ -अरुको प्रशंसा गर्न सिक्नुस्- अध्ययनका अनुसार अरुलाई प्रशंसा गर्दा, दयाभाव देखाउँदा आफूलाई सन्तुष्टि दिन्छ । कसैलाई राम्रो प्रतिक्रिया दिँदा उसलाई पनि राम्रो महसुस हुन्छ भने तपाईंको खुसीको सीमा पनि बढ्छ तर प्रशंसा गर्दा पनि सम्मानित तरिकाले गर्नुस् यदि तपाईंले कसैलाई शारीरिक आवरणबाट प्रतिक्रिया जनाइराख्नुहुन्छ भने यी कुरामा ध्यान दिनुहोस् ।
८ -लामो श्वास फेर्ने अभ्यास गर्नुहोस् -आफूलाई संयमित राख्न लामो श्वास लिनुहोस् । लामो श्वासप्रश्वासको व्यायामहरुले चिन्ताबाट मुक्त गर्ने हार्भर्ड हेल्थ बताउँछ । आँखा बन्द गर्नुस्, आफूले मनपरेको राम्रो ठाउँ र यादगार सम्झना कल्पिनुस् । त्यसैगरी विस्तारै लामो श्वास नाक र मुखबाट लिनुहोस् । यो प्रक्रिया धेरै पटक गर्नुहोस्, तपाईंलाई शान्त महसुस हुन्छ । यदि तपाईं कुनै गाह्रो अवस्थासँग गुज्रिरहनु भएको छ भने यो प्रक्रिया अपनाउन सक्नुहुन्छ ।
९ -बेखुसीको क्षण पनि स्वीकार्नुस्-सकरात्मक कुरा जहिल्यै पनि राम्रो हुन्छ तर जहिले पनि जीवनमा त्यही भइराख्छ भने हुन्न । सकारात्मक र नकारात्मक चिज जीवनको दुई पाटा हुन् । केही अशुभ समाचार छ या तपाईंले केही गल्ती गर्नुभएको छ भने जबर्जस्ती खुसी हुने प्रयत्न नगर्नुस् । आफूले गरेको गल्ति या बेखुसीलाई पनि स्वीकार्नुस् । नराम्रो क्षण या दुःखद क्षण कस्तो हुन्छ भनेर आत्मबोध गर्नुहोस् र यो मनन गर्नुहोस् कि, किन आफू दुःखी हुन पुगेँ भनेर ।
१०- डायरी या टिपोट गर्ने बानी बसाल्नुहोस् -लेख्नु आफ्ना विचार तथा भावना पोख्ने अनि योजनाहरु बनाउने राम्रो माध्यम हो । यसरी लेख्दा मन हल्का हुन्छ । लेख्नका लागि तपाईं विद्धान वा एकदमै लेख्न जान्ने हुनुपर्छ भन्ने छैन । हरेक रात सुत्नुभन्दा पहिले केही न केही लेख्ने बानी बसाल्नुस् ।
११- साथीभाइसँग भेट्नुहोस् –मिल्ने साथी भयो भने धेरै कुरा सेयर पनि हुन्छ र खुसी रहन सकिन्छ । साथीहरुको याद आयो भने समय मिलाएर भेट्नुहोुस् । प्रत्यक्ष भेटेर कुरा गर्दा र फोन तथा म्यासेजमा कुरा गर्दाको क्षण नै छुट्टै हुन्छ । जति ठूलो हुँदै गयो, साथीहरु पनि घट्दै जान्छन् । तर धेरै साथीहरु हुनु ठूलो कुरा होइन, मिल्ने साथी हुनुपर्छ । एउटै साथी भए पनि काफी हुन्छ । नत्र तपाईंले साथीको रुपमा घरपालुवा जनावर पाल्न सक्नुहुन्छ । अहिले कुकुर पाल्ने निकै नै चलन छ । विभिन्न अध्ययनका अनुसार कुकुरले मानिसको सच्चा साथी बन्न सक्ने र तनाव मुक्त गर्न सहयोग गर्दछ ।
१२ घुम्न निस्किनुहोस् -घुम्ने जाने साथी पाइराख्नुभएको छैन ? त्यसो भए एक्लै गइदिनुस् । एक्लै घुम्न जानुहुन्न भनेर कसले नियम बनाएको छ र ? आफ्नो मनपर्ने रेस्टुरेन्ट जानुस्, फिल्म हेर्न जानुहोस र आफूलाई मन लागेको ठाउँमा जानुहोस् यदि तपाईं सामाजिक हुनुहुन्न भने आफू एक्लै भए पनि यस्ता क्रियाकलाप गरेर रमाउनहोस्, यसले खुसी मिल्छ ।
१३ आफ्नो शरीरको ख्याल राख्नुहोस् -सबैभन्दा महत्वपूर्ण स्वास्थ्य नै हो । स्वस्थ्य भए खुसी रहन सकिन्छ । समयसमयमा चिकित्सकसँग शरीरको चेकजाँच गराउन आवश्यक छ ।
१९ असार काठमाडौं । चर्चित गायक शिव परियारको नयाँ म्युजिक…
लकडाउनमा ‘छैनौ तिमी’को साथमा आइन मेलिना (भिडियो सहित)
एउटि आमालाई थाहा हुन्छ सन्तान गुमाउनुको पिडा । सन्तान को…